Isitudiyo soBugcisa seKhaya likaPerry Winkler
Penfield, Pennsylvania, United States
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPerry
Ikhaya lethu likwiinduli zaseWest-Central Pennsylvania. Uya kuziva usekhaya uhlala kweli khaya lipholileyo lebhokisi yetyuwa emaphandleni e-PA. Iimayile ezi-6 kuphela kumgama omhle wePaki yeSizwe, "iParker Dam". Ibekwe ngokufanelekileyo “kwiZiko leeNdwendwe le-Elk”, kunye “neZiko labatyeleli baseKinzua Bridge” kunye needolophu ezincinci kunye nokuloba, ukukhwela intaba kunye nomsebenzi omninzi wangaphandle. Ikhaya likulungele i-I-80 kwaye lisendleleni eya ePenn State Univ. yePenn State Football.
Ibhedi yoKumkanikazi kwigumbi lokulala elisezantsi yibhedi eKhethekileyo yokuThuthuzela. Kukho amagumbi okuhlambela abucala kwigumbi lokulala ngalinye. Ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala elikhulu, igumbi lokutyela, kunye nedesika yeshishini. Igumbi lokuhlala linefenitshala entle yesikhumba ene-3 recliners. Indawo ifanelekile kwiholide, ishishini, ixesha elifutshane, okanye irenti yexesha elide.
4.96 ·Izimvo eziyi-24
4.96 · Izimvo eziyi-24
Kukho ivenkile efanelekileyo ebonelela ngokutya kunye neDola Jikelele engaphantsi kweemayile. Izikhululo zegesi ezi-2 kunye neSikhululo se-Exxon siyakwazi ukulungisa kwaye uDave yindoda elungileyo. Kukho iApplewood BBQ evula ngoLwesine ukuya ngoMgqibelo. I-BBQ egqwesileyo, iiBurgers, kunye neeSaladi kunye nokunye. Kukho ezinye iindawo zokutyela ezimbalwa phakathi kwe-6 ukuya kwiikhilomitha ezi-8 emantla kwaye emva koko ukutya kunye nokuzonwabisa kwiidolophu ezincinci 10 ukuya kwimizuzu engama-20 kude. IWinkler Gallery Art Education Centre ibekwe phakathi kweemayile ezili-14 kumbindi weDuBois, PA kwaye ivulwa ngoLwesihlanu ukuya kutsho ngeCawa, okanye ngokuqeshwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Perry
Kukho indawo yokuhlala encanyathiselweyo ngaphezulu kwegaraji esiza kuyenza ikhaya lethu ukuqala ngenyanga kaMeyi 2020. Siza kufumaneka ngokobuqu, ngefowuni, i-imeyile, imiyalezo, okanye iSMS.